Nzira yekuwedzera sei mitauro yakawanda SEO kune webhusaiti?
Mazuva ano, anenge munhu wose ari kuita webhusaiti yekutengeserana anogona kubudirira kushanda chigadzirwa chechigadzirwa kana mutengi webasa. Yakava yakakosha nokuda kwemasimba makuru eWebhu, zvichibvumira chero mupi webhizimisi wekutsvaga webhutori kuti ave nemamiriyoni evanhu vangave vatengi munyika yose. Uye kutaura nevateereri vemitauro yakawanda kumativi ose ichada kuti iwe uwedzere mitauro yakasiyana-siyana SEO kune webhusaiti (kunze kweiwo nyika dzakawanda SEO).
Nenzira iyo, kushandisa Runjini yakarurama yekutsvaga mazano mumitauro yakasiyana-siyana (yepasi pose) inogona kukurumidza kuve yakanyatsobudirira kupfuura yakanyatsotarisirwa SEO. Kwete kutaura kuti iwe paunowedzera nyika dzakawanda SEO kune webhusaiti, iwe uri kungozarura musuo kune vasingaverengeki makumi emamiriyoni emikana yakasiyana yepurojekiti yako yepaIndaneti (kunyanya kana ichienzaniswa nemabasa ekutengeserana ezvidhina-uye-matenga). Kuzvitora zvishoma-zvakakosha kuwedzera SEO kune webusaiti inoita kuti zvive pachena uye kutaurirwa kune vateereri vepasi rose ichangobva kuve INOFANIRA kune chero ipi zvayo yebhizimisi yemabhizimisi, achida uye akagadzirira kuti kubudirire chaizvo.
Chokutanga pane zvose, usati watora chisarudzo chakanaka chekuwedzera SEO kune webhusaiti pamusangano wepasi rose, iwe uchada kuzvisimbisa semutungamiri anotonga imwe nhamba yemisika. Kana imwe bhizimisi rako idzva razadzisa chinangwa ichi chikuru mumutauro mumwe, zvinhu zvinotevera zvaunofanira kuita ndezvokutaura kune vamwe vanyatsotevedzwa vateereri kune dzimwe nyika. Sezviri pachena, iyo nzira inotanga nekushandura mapeji ako ewebhu muchipiri uye chechitatu mutauro, uchiri mupfungwa mupfungwa yakanyanya kuwedzera SEO kune webhusaiti pahuwandu hwemitauro yakawanda inotevera. Saka, ngatitangei kufunga nyaya yacho nhanho.
Chinhu chimwechete panguva
Kazhinji kambani dzinomhanyira kunotanga mawebsite mumitauro yakawanda kubva pakutanga. Tichifunga kuti iwe une bhajeti yakakura chaizvo yekutanga nguva, pfungwa yacho inogona kuoneka yakajeka. Asi pano kunouya chiyeuchidzo. Fungidzira, takabudirira kutanga webhupu yekutengesa iyo inoratidzwa kumusoro kwemashoko emagumisiro ekutsvaga (iyo SERPs), somuenzaniso muchiRungu. Uye pane chivimbo chekuti shanduro dzedu dzekune dzimwe nyika, somuenzaniso, dzakashandurirwa muchiSpanish kana muchiJerman, kuti dziitewo saizvozvo? Handifungi. Saka, patinofanira kutanga rini kuwedzera kwemitauro yakawanda? Ndinotenda kuti nguva yakanakisisa iwe wati watotanga uye wakagadzirisa kuchengetedza webhusaiti yakabudirira muChirungu:
Iva newebhizimusi webhusaiti yemuenzaniso inoshanda zvakanaka muchirungu
Isa zvakanaka tsvaga paCMS inonzwisisika uye sangano rewebhu
Iva akachenjera kuti utange mutauro mutsva mumwe chete panguva (uchiita saizvozvo, uchava nenguva yakakwana yekuwedzera SEO kune webhusaiti mumutauro iwoyo, saka uwane huwandu hwakasiyana muSERPs usati wapinda mumitauro yakawanda yemitauro yakawanda)
Ita mashoko akakodzera ezvitsvakurudzo pane imwe shanduro yemutauro iwe uri kuronga kuwedzera (nenzira iyo, sarudza chete mashoko anokosha ane chekutsvaga kwepamigwagwa,
Shanduro yega yega yebhundaneti yako inenge ichangobva kushandurwa inofanira kusanganisira zvishoma mapeji emabhulogi ako, kana zvimwe zvingabatsirwe (ita izvi nekukurumidza, iwe uchisimudzira mapeji ewebhu kuburikidza nemushandirapamwe wekuvakidzana kwemitauro yakawanda)
Chengetedza chepiri ol pamusoro pezvinhu zvose
Kuenda mitauro yakawanda, unofanira kufunga kutora mutauro wehutano hwakasiyana-siyana hwehutano hwakanaka (CMS). Hapana chikonzero chekutora mazita akawanda akasiyana-siyana panguva, sezvo ini ndichikurudzira kuchengeta CMS imwe chete kushandura zvinyorwa zvako zvakapetwa kakawanda. Kune zvakawanda zvemazuva ano Content Content Systems zvinokubvumira kuti uite mawebsite akawanda mumitauro yakasiyana-siyana achigovera imwe database. Pakati pevamwe, ndinokurudzira kushandisa rimwe rinotevera: Joomla, Magento, WordPress, kana Drupal. Nenzira iyo, iwe unogona kuva nezvimwe zvakanaka zvinobatsira, sezvinotevera:
yakaderedzwa kugadziriswa nzvimbo, uye ine mari inodhura yekugamuchira mari (rangarirai, Google haisi mutsauko kune nzvimbo yaunogara, sezvo injini yekutsvaga inoshandisa mamwe zviratidzo kuti uratidze kuti iwe unofanirwa kudii vateereri)
kutarisira mashizha akawanda pane dzimwe shanduro kana mawebsite akawanda
kuwandisa kwezvekushandisa kwewebsite dzako panguva imwe chete, iwe unofanira kugadzirisa kugadziriswa kana kukurudzira imwe chete
Ndinokurudzira tichifunga nezvekutevera mazano anotevera ekuvaka shanduro yako yewebhutiro:
Dunhu rakakwirira uye nhamba yekodhi dzemuzinda (somuenzaniso. De for Germany)
Zita rega rega rese-level rinofanira kunge rine sub-domains
Madzikoma aya anouya kune imwe nzvimbo yepasi rose
Funga nezvemasaramita URL
) Kudzora mutauro nekiki
Kana ini, kusarudza nzvimbo dzakanyorwa-nyika kuti uwedzere SEO kune webhusaiti kune zvigaro zvakawanda. Kuva nenyika geotargeting yakakosha yekutengesa, sezvo vese vashandisi vachataurirwa kamwechete, kuti bhizinesi renyu renyika rose rakakomba zvakakwana kuisa pfungwa pane imwe nyika imwe neimwe. Mushure mezvose, zita renzvimbo rakagadzikana nemashoko makuru rinogona kushandurwa nyore nyore kune imwe nyika kuti iwedzere kukurudzira pamutambo wako wekambani kana kushanda kunyange kunyanya kuisa pfungwa (chinyorwa, izvi zvisarudzo hazvizoiti, kana iwe uri kutarisana nemamwe mapeji akawanda, ayo atove rakanyanya kugadzirisa shoko rimwe chete kana kuti mutsara unokosha).
Zvose zvese zvekugadzirisa zvinhu zvandaiwanzowedzera SEO kune webhusaiti yega.
Kuva neDesktop imwechete yeCMS yakanaka. Asi zvakakodzera kuongorora kana sarudzo yakakwana yakakwana zvakakwana. Nenzira iyo, unogona kushandisa hreflang tema kutaurira Google chairo rurimi (kwete nyika) iyo peji yebhu yega yega inonyorwa.
Kufunga nezvekushandura kwezvinyorwa, kunyanya pamusoro pegiramende risingafi rakakosheswa neGoogle, unofanira kushandisa chete shanduro yakanyatsonaka yekunyora kwechikamu chega chewebsite yako. Asi kuongorora zvakadzika ndakaona kuti mitemo yemagiramu inogona kuregererwa dzimwe nguva, zvichinyatsoshandiswa pakugadzirwa kwekwenyanzvi. Ndiri kureva kuti mawebsite akawanda ane hukuru hwepamusoro anowanzoshandisa vazhinji varombo shanduro yemashoko kana mazwi, izvo zvichiri kuratidza kuti zvakakosha uye zvakakodzera. Saka, ndinokurudzira kutevera mitemo yakawanda yemitauro ye ndima yako yakazara yemagwaro, uye kwose kwose. Ingoyeuchidza izvozvo nokuda kweMetadata yako, URL, uye Anchor text iwe wakasununguka kuisa kushevedzera zvakanyanya pamashoko ekutsvaga ezvinyorwa chete, panzvimbo peyo maitiro avo.
Pakugumisa, ndinoda kuisimbisa zvakare - kushandisa shanduro yakawanda kazhinji kudambura zvakawanda zvezvinhu zvakakosha ndiyo nzira yakaipisisa yekuwedzera SEO kune website. Kuti uwane hukuru hwakanaka hwekushandiswa kwenyika kumarudzi maviri ekutsvakurudza, ndinokurudzira kuti uve nekushandura kwakarurama kwewebsite, iyo inosanganisira zvakasimba kusungirirwa kwekuvaka uye in-deep keyword research. Uye usambomhanyira kunze kuedza kuvhara mitauro yakawanda panguva imwechete, sekuti kubudirira kwebhizimisi rezvemabhizimisi munyika yose kunoda kuita zvose zvisingagumi, chinhu chimwe pashure peimwe Source .